Codbixiyasha Maraykanka oo codkooda ka dhiibanaya doorashadii Madaxweynanimo [Sawirka: GETTY IMAGES]
WASHINGTON - Madaxda hay'adaha sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in Ruushka uu sii wadi doono iskudayga faragelinta ah ee uu ku hayo siyaasadaha Mareykanka, waxaana ay sheegeen in iskudayaddaasi ay khatar ku yihiin doorashooyinka la qaban doono bisha Nofeembar.
Hay'adda dambi baarista gudaha Maraykanka ee FBI-da ayaa sidoo kale baaritaan ku sameynaysa isku-deygii Ruushka uu ku sameeyay inuu farageliyo doorashada iyo xiriirka ka dhaxeeyay Aqalka Kremlin ee Ruushka looga arrimiyo iyo guddiga ololaha Trump.
Ruushka oo halis galinaya Ammaanka Adduunka
Caalamka 15.03.2018. 12:07
Dowladda Maraykanka ayaa is barbar taagtay dowladda Britain, kuna eedeeyay Ruushka in...
Sarkaal Mareykan ah oo been u sheegay FBI-da
Caalamka 24.02.2018. 10:59
Trump oo ka xanaaqay buugga Fire and Furry oo Clinton akhrisay
Caalamka 29.01.2018. 13:37
Xiisadda Mareykanka iyo Venezuela oo cirka isku shareertay
Caalamka 25.01.2019. 17:49
Trump oo lacag u raadinaya dhismaha darbiga xuduudda
Caalamka 11.12.2018. 15:21
Mareykanka oo halis cusub oo soo wajahday iyo ciidamo la dhigay xadka
Caalamka 30.10.2018. 10:55
Dagaalka Ganacsiga Mareykanka iyo Shiinaha oo cirka isku shareeray
Caalamka 23.08.2018. 16:48